क्याम्पसबाट भागेकाहरु… – sunpani.com
नेपालगञ्ज – ‘हेल्लो अध्यक्ष ज्यू, हाम्रो टोलमा क्याम्पसबाट भागेका तीन जना छन् । उनीहरुको कोरोना जाँच गरिदिनु प¥यो !’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाललाई यस्तो फोन आयो । वडाध्यक्ष रिजालले उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य टीमलाई उक्त खबर गरिदिए ।
नेपालगञ्जमा कोरोना देखिएपछि ‘बेवास्ता’ गरेर बसेका व्यक्तिहरु कोरोना जाँच गर्न अग्रसर भएको यो एउटा उदाहरण हो । खासमा ती व्यक्तिहरु चैत्र १० गते महेन्द्र बहुुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जबाट भागेमध्येका थिए ।
भारतबाट घर आएका ठूलो संख्यालाई त्यो दिन नेपालगञ्ज नाका जमुनाहामा रोकिएको थियो । उनीहरुलाई स–सम्मान नगर बसमा चढाएर क्याम्पसमा ल्याइयो । क्याम्पसलाई नै क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत गरेर उनीहरुलाई सुरक्षित तरिकाले केही दिन त्यहाँ राख्ने तयारी थियो । क्याम्पसमा ल्याएको केहीबेरमा ‘घर जान नभ्याइने’ भन्दै अधिकांश पर्खाल नाघेर निस्किए । त्यो दिन नाकाबाट आइपुगेका ८ सय ९९ जनामध्ये ६ सय ९१ जना आफूखुशी घरतिर हिडे । भनौ, उनीहरु भागे ।
त्यही भाग्नेमध्येका नेपालगञ्ज–१ का तीन जना यतिबेला कोरोना परीक्षण गर्न लागि परेका छन् । यतिका दिनसम्म उनीहरु गुपचुप नै थिए । वडाध्यक्ष रिजालले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्दलाई खबर गरिदिनुभयो । चन्दले उनीहरुको स्वाव लिनका लागि टोली पठाएको जानकारी दिनुभयो । ‘स्वाव परीक्षण गर्छौ । उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छौं । रिपोर्ट के आउँछ, त्यही अनुसार अगाडि काम हुन्छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्दले भन्नुभयो ।
वडा नं. १ मा मात्रै होइन, अन्यत्रबाट पनि यस्तो फोन आइरहेको बुझिएको छ । चन्दले वडा नं. ८ बाट यस्तो खबर आएको जानकारी दिनुभयो ।